‘Nithi angiyephi?’ - Stuart Baxter | News24
‘Nithi angiyephi?’ - Stuart Baxter
MHLAWUMBE iningi labalandeli bebhola laseMzansi besebecabanga ukuthi umqeqeshi weBafana Bafana uStuart Baxter uzophonsa ithawula noma ahlanze ngedela emva kokuhluleka ukuya kwi-World Cup eRussia ngonyaka ozayo, kodwa yena uthi uyindoda futhi akayi ndawo.
UBaxter uthi yena ngokudalwa akalona ivaka noma isahluleki futhi usazoqhubeka nje nomsebenzi wakhe.
Lomqeqeshi uthi yena uyavuma ukuthi iqembu lesizwe iBafana Bafana phela yehlulekile yancama ukuya kwimidlalo yoMhlaba eRussia ngo 2018 ngaphansi kwakhe kodwa ziningi izinto ekuzofanele zibhekwe noma zicutshungulwe ngaphambi kokuthi kusolwe yena.
Kuzokhumbuleka phela ukuthi uBaxter uwine umdlalo owodwa kuphela kwemine kweyokuhlungela abazoya eRussia. Iningi labantu ikakhulukazi kwabazifelayo ngebhola laseMzansi besebecanga ukuthi uBaxter uzodedela abanye njengesehluleki. Ngokomlando lomqeqeshi akaqali ukuhluleka ukusa uMzansi kwiWorld Cup .
Ngaphandle kokudliwa ngoLwesihlanu oludlule ngo 2-0 yiSenegal nokuchaza ukuthi asiyindawo besekuwuhlulwa kweBafana Bafana okwesithathu emva kokudliwa kabili yiCape Verde. Kuzokhumbuleka futhi ukuthi uBaxter wake wahluleka wancama ngo2006 nalapho kwakuzoyiwa kwiWorld Cup eGermany.
“Ngiyazi noma sengiqalile ukuzwa abantu bengibuza ukuthi kaze sengizokwenzenjani-ke manje emva kokuphela kwamathemba ethu okuya kwiWorld Cup eRussia.
Ngitshele ukuthi kuyiqiniso yini ukucabanga kanjalo noma kuwubudoda yini.
Kahle kahle ake ubale izinsuku noma izinyanga ukuthi zobe ngaki ngithathe noma nginikwe lomsebenzi ?
Uma ngingaphozisi noma uma uzibalela wena ngeqiniso uzobona ukuthi ngiphathe lesikhundla izinsuku eziwu 220 ngase ngiba sekhempini nabadlali izinsuku eziwu 40 kuphela.
Ngempela ngempela uma uMzansi uneqiniso futhi uzibona izinto, mina sengingalindelwa ukuthi ngisule kulesikhundla noma ngiphonse ithawula njengesahluleki ?,” kusho uBaxter.
UBaxter usaveva namanje ukudinwa uthi futhi abantu baseMzansi kufanele bakhumbule kwakungeko mibandela kwinkontileka yakhe noma ekusebenzeni kwakhe.
Uthi akukho lapho kusho khona ukuthi ukuya kwiWorld Cup ngo 2018 eminye yemibandela.